Amabinzana akhuthazayo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ungomnye wabantu ongathanda ukwabelana nabo amabinzana ukukhuthaza kwaye unike imiyalezo ekhuthazayo kwabanye abantu, emva koko uqhubeke ufunda eli nqaku apho siza kukubonisa amanye amabinzana onokwabelana ngawo nabanye kwaye uthumele ulwazelelelo oluncinci kubomi babo.
1 Amabinzana ohlukeneyo ukukhuthaza nokubonisa
2 Zithini izifundo zenzululwazi?
3 Zincede, ndiza kukunceda
4 Kutheni amabinzana enceda ukukhuthaza?
5 Amagqabantshintshi enkuthazo
Amabinzana ohlukeneyo ukukhuthaza nokubonisa
Ukwazi ukusoloko ufunda kwaye ucamngce ngemiyalezo eyakhayo kuye kwaqinisekiswa ngokwenzululwazi ukuba kunesiphumo esihle kubo bonke abantu, ngakumbi ukuba bahamba iinkqubo ezinzima kakhulu okanye xa besondele kakhulu ekwenzeni izigqibo ezinzima kwaye bengazi ukuba Yeyona ichanekileyo.
Eyona ndlela isebenzayo abanye abantu abayisebenzisayo kwaye kweli nqaku sicebisa ukuba ungayisebenzisa, kukubeka izinto ezahlukeneyo amabinzana ukukhuthaza naphi na apho kubonakala khona nalapho uhlala ufunda kwaye ubakhathalele.
Ungayisebenzisa "ukuyithumela" kuyo nayiphi na ikona yasekhaya, iofisi yakho, emotweni yakho, ungabeka indawo amabinzana axhasayo ngasemva kwifowuni yakho. Konke oku kuya kunceda ingqondo yakho ukuba yenze into eyinyani kwaye unokufumana isisombululo esifanelekileyo nakuphi na ukungqubana okuzayo.
Umzekelo woku esinokuwukhankanya yimeko yomyili waseSpain uDiana Ospina, obesebenzisa obu buchule ekhayeni lakhe ixesha elide, kokubini yena kunye nawo onke amalungu osapho lwakhe kwaye siza kukuxelela ngamava akhe. .
UDiana Ospina ntsasa nganye xa esihla kumgangatho wokuqala wendlu yakhe, udibana nomyalezo obekwe phambi kwezinyuko zakhe eziseludongeni kwaye uthi: “Ziphathe kakuhle. Sebenza nzima. Hlala uthobekile. Ncuma rhoqo. Ungaze uyeke ukufunda. Uthando olukhulu ". Ngokufumana umyalezo apho ungawufunda khona yonke imihla, ingqondo yenza indawo apho yamkela khona izinto ezintle kwaye usuku lwakho litshintshe ngokupheleleyo.
Zithini izifundo zenzululwazi?
Uninzi lwabafundisi-ntsapho kunye noochwephesha bengqondo bayazicacisa okanye bazithethelele ezi zenzo kwinqanaba lenzululwazi, kuba sonke sisebenzisa iinethiwekhi zentlalo kwaye kukho amaphepha aliqela azinikele ekusasazeni olu hlobo lwamabinzana ashukumisayo.
Isazi ngengqondo saseSpain uJesús Alcoba uthi "Yonke into ihlala emandleni amagama esiwathethayo kwaye sithi kuwo kwaye anokuba nefuthe elihle okanye elibi kwizenzo zethu.”. Oku kuthetha ukuba ukuba sithetha amazwi akhuthazayo kuthi singatshintsha indlela esicinga ngayo kwaye sincede nabanye amabinzana ukukhuthaza.
Kananjalo isayikholojisti uMaría Elena López ukholelwa ekubeni ukuthetha izivakalisi ezikhuthazayo kuneendlela ezilungileyo nezingalunganga, enkosi kwinto yokuba ifuthe labo kukuba banempembelelo kwimvakalelo, umzekelo, banokunika inkuthazo xa kusithiwa banika ithemba, banayo Injongo kukuvelisa imeko yentlalontle esebenza njengombane wokuziphatha kwemihla ngemihla.
Uphando olwenziwe ngoochwephesha bezengqondo kunye nabahlohli bafumanisa ukuba amagama anamandla, ngayiphi ingqiqo? Ewe, ezi nzululwazi zisebenze neqela labantu elahlulwe langamacandelwana amabini asebenza kumceli mngeni omnye.
Elinye iqela lanikwa amabinzana ahlukeneyo okukhuthaza ukuba afunde kwaye elinye iqela lanikwa amabinzana angathathi hlangothi nawo awafundayo. Iqela lokuqala linomsebenzi ongcono kuneli lesibini, ukuxhathisa ngaphandle kokuyeka i-46% ngaphezulu. Emva koko banikwa omnye umceli mngeni kunzima kakhulu kunangaphambili kwaye iqela lokuqala lanyamezela i-35% ngaphezulu kweyesibini.
Konke oku kuye kwafikelela kwisigqibo sokuba amabinzana akhuthazayo navuselelayo anokuvuselela amandla kunye nokufuna ukwenza izinto nzima.
Isazi ngengqondo uLópez ucacisa ukuba amabinzana okhuthazayo kunye nokuqinisekileyo asebenza ngakumbi kubantu abazilungelelanisa nobunyani babo kwaye babancede benze amanyathelo aphathekayo. Ikwabonisa ukuba amanye amabinzana ahlala ehlengahlengiswa njengemelo ukunceda ukomeleza kunye nokulwela iinjongo.
Zincede, ndiza kukunceda
Las amabinzana ukukhuthaza okanye njengoko besaziwa, amabinzana akhuthazayo okanye akhuthazayo anefuthe elihle njengoko besesichazile ngaphambili, la mabinzana ayilwe ngaphakathi kwendlela ye-NLP (Neurolinguistic Programming), enjongo yayo ikukuqinisekisa amandla igama lokwenza iinyani kunye nokunceda ukukhokela abantu ukufezekisa amaphupha abo kunye neenjongo ebomini.
Kwangolo hlobo lunye, ugqirha we-neuropsychologist uViviana Restrepo ucacisa ukuba ukuze la mabinzana abe nefuthe elihle kubomi babantu, kufuneka baphindaphinde bakholelwa kubo, oko kukuthi, abantu kufuneka bakholelwe into abayiphindayo ukuze benze ifuthe kwingqondo emva koko kwindlela oziphethe ngayo.
Ucacisa ukuba ayonelanga kuphela kukuphinda ibinzana elithi "Ndingaluphumelela uviwo" kufuneka akholelwe ukuba angayenza kodwa ethathela ingqalelo ukuba kufuneka afunde kwaye afunde into abayidingayo ukuze bakwazi ukuphumelela uviwo. Konke oku kuthetha ukuba xa abantu bekholelwa kubuchule ababufumene nakwizikhundla zabo, bayakwazi ukucacisa iingcinga ezintle kunye neenkcazo kwaye bazithembe ngakumbi kwizakhono nobuchule babo.
Kutheni amabinzana enceda ukukhuthaza?
Impembelelo yabo kukuba bakhuthaza utshintsho ezingqondweni zabantu. Ngokubanzi, izivakalisi ezifutshane zinamandla ngakumbi kwaye kulula ukuzifunda kunye nokukhuthaza ukurhweba kunye nokwenza izigqibo.
La mabinzana asebenza njengesikhuthazo esiqinisa izimvo zabantu, nangona kunjalo, kufuneka bakhumbule ukuba nangona bengenzi monakalo, abayenzi imimangaliso. La mabinzana avelisa okuhle kodwa kufuneka ahambisane nokhuseleko abanalo kubo nakubuchule babo. Siyakumema ukuba undwendwele eli khonkco lilandelayo apho uzakufumana khona amabinzana kaPapa Francis ukubonisa.
Nanga amabinzana aliqela okukhuthaza ukuba uziqhelanise kwaye wabelane nabantu abazifunayo:
Sukuma ngelize ukuba unenjongo engqondweni.
Musa ukuvumela ilitye elisendleleni likuyekise ukuya phambili.
Ukuba uphupha into engenakwenzeka, uya kuyenza ukuba yenzeke.
Sukuncama! Kushiyeke okuncinci ukufikelela kwinjongo!
Yonke imiqobo isenza somelele, sibe nezakhono ngakumbi, kwaye sibe nesibindi ngakumbi.